Redmi 8 na 8A ekwenyela na Thailand site na NBTC | Gam akporosis
Anyị natara ihe a Ihe ngosi RedN 8, usoro ohuru ohuru nke ohuru nke na-etu ezigbo njiri mara mma na nkọwapụta teknụzụ kachasị elu. Ihe eji mara ama nke ika obula bu nke bu ndi buru ibu, mana ndia gha enwe obere uzo di iche iche ma obu ndi di iche ma nwekwaa ndi edozi. Iji rube isi na ya, Redmi ga-amalite Redmi 8 n'oge adịghị anya.
Nkwupụta ọkwa nke ndị a mobiles a na-echere ogologo oge dị nso. NBTC bụ ụlọ ọrụ asambodo Thai, ma kwadola ha ugbu a na ọdụ data ya; Ọ bụ ya mere anyị ji kwuo na ha na-aga ikwupụta ya.
Asambodo ahụ gosipụtara na Redmi 8 nwere akara ngosi M1908C31G, ebe akara ngosi nke Redmi 8A bụ M1908C3KG. E wezụga nke ahụ, ọ dịghị ihe ọzọ ekpughere banyere ekwentị abụọ ahụ.
Redmi 8 kwadoro
Redmi 8A kwadoro
Tupu mmalite nke usoro nyocha, Foto ndị dị ndụ ga-abụ nke Redmi 8A pụtara na webụ, na-ekpughe nhazi na ụfọdụ nkọwa. Agbanyeghị, akara ngosi ụdị ngwaọrụ a bụ "M1908C3IH". Ngwaọrụ nwere ụdị ihe atụ yiri ya, M1908C3IC, bụ nke TENAA gbaara n’onwa Ọgọst.
Dabere na ndepụta TENAA na foto ndị ahụdebara, Redmi 8A ga-enwe ihuenyo 6.2-inch na ọkwa mmiri. A ga-eji octa-core processor 2.0 GHz kwadoro ya ruo ihe dị ka 4 GB nke RAM na 64 GB nke nchekwa nchekwa. Dị ka nkwalite, ọ ga-enwe kamera azụ abụọ yana ihe mmetụta 12 MP bụ isi. Ọ ga-enwe nyocha mkpisiaka na azụ. Igwefoto selfie bụ igwefoto MPN 8. Nnukwu nkwalite ọzọ bụ mmelite batrị site na 4,000 mAh na 5,000 mAh. Ọ ga-agba ọsọ gam akporo 9 ma ọ ga-adị na ọtụtụ agba, gụnyere oji, ọbara ọbara, acha anụnụ anụnụ, pink, na ọcha.
Redmi Rịba ama 8 Pro nwere mbipụta pere mpe nke World of Warcraft
N'aka nke ọzọ, Redmi 8 nkọwa na imewe ka amaghi. Anyị na-atụ anya na nkọwa ndị ọzọ ga-apụta mgbe Xiaomi malitere izipụ ndị na-ere ya otu Xiaomi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Redmi 8 na 8A ka ndị Thailand mara na NBTC: igba egbe na-eru nso
OneDrive maka gam akporo ruru XNUMX ijeri nbudata